ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၂
ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် – ၂
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 20, 2012 in Creative Writing | 54 comments
ရတနာသိုက် ရှာပုံတော် အပိုင်း (၁) အား ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၏။ ဖတ်ရှုလိုသူများ အနေဖြင့် လင့်ခ်ပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း …
ထိုအခါ လူရွယ်မှ “ငါ့ညီ … အကို့အတွက် လက်ဖက်ရည် စိမ့်စိမ့်လေး တစ်ခွက်ဖျော်ပေးပါကွာ” ဟူ၍ ပြောလိုက်လေရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများ၏ အကြည့်မှာ ရုတ်ချည်းဆိုသကဲ့သို့ပင် ပြောင်းလဲသွားပြီး “ဒရိုင်ဘာကသာ ပိုနေတာပါကွာ၊ လူရွယ်ကတော့ မွန်မွန်ရည်ရည်ပါပဲ” ဟု အချင်းချင်း တီးတိုး ပြောဆိုနေကြလေတော့၏။
သများဆီက ဟိုအပြား ကို အူးခိုင် လာမလုအောင် လုံခြုံစွာ သိမ်းထားပါတော့မယ်ချင့်
ဖြစ်၊ရပ်၊ပျက်.. ဥပါဒ်ဌီဘင် -10+1 သုံးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ…
ကွန်ပျူတာ.. 01 ထက်.. နည်းနည်းပိုပြီးရှုပ်ထွေးတာပဲ ရှိတယ်..။
Xigit နည်းပညာနဲ့.. လုမည်ဖြစ်ကြောင်း. ကြိုတင်သတိပေးပါတယ်..
ဖတ်ရတာတော့ အားမရဘူးဗျာ..တိုနေလား လို့…
ဒီတစ်ခါ အရင်ဆုံး ဖတ်သွားလိုက်ပြီ …
အယ် .. မမဝေညာတယ်
အူးလေးအံချာဒုံးရေ နောက်တစ်ပိုင်းကို ရှည်ရှည်ရေးဗျ
ဟုတ်တယ်ဗျို့ … အရပ်တို တာ ..၆လက်မ ဒေါက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရပေမယ့် ..
ပိုစ့် တိုတာက ဖတ်ကောင်းတုန်း ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဆိုတော့ ရင်ထဲကျလိကျလိ (ခွက်ဒစ်တူ ပန်ပန်)
အတတ်နိုင်ဆုံး ရှည်ရှည်ရေးပါ့မယ်ဗျ …
သိမ်းလည်း သိမ်းထားဗျာ ..
ဖိုက်လွှတ်ရအောင်လည်း အသင့်ပြင်ထားဦးဗျာ ..
ဆက်လက် ကြိုးစားပြီးလည်း ရေးသားပါဦးမယ် ..
ခုလို လာရောက် အားပေးဖတ်ရှုတာကို ကျေးဇူးပါနော့ ..
ဂျီးဒေါ် ကလည်း …
ဖတ်ရှုတာကို ကျေးဇူးပါ …
ဇာတ်ကွက်ကြည့်ရတာ ကျုပ်က ဇာတ်လိုက်ကစ်လို့ ဘေးကျိုးမဲ့ပုံပေါ်နေဒယ်
ကျုပ်က ဇာတ်လိုက်ကို စိတ်ရှိလက်ရှိအပီကြွေး ဇာတ်လိုက်က
ဇာတ်လိုက်ဂ သေလုသေမြောပါးကျမှ လက်ထဲဂို ဘဒင်းဂန်းဂျီးရောက်ချင်သလိုရောက်လာပြီး
ခုလိုအသေခက်တာကတော့ မြန်မာ့ငပိ ကိုစားလို့ဖစ်ဘာဒယ်
ဇာတ်လိုက်ကို အပီအပြင် ဆွဲပြီးမှ သေချင်ဒါဂိုး ..
တော်တော် ခံရမယ်နော် .. ချင်းချားဘာအုံး .. အဟိ ..
ဒါနဲ့ မောင်ပေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်က မဲမဲ ပုပု ပိန်ပိန် ရုပ်ဆိုးဆိုး လေးမဟုတ်လားဟင်
ဝတ္တုကတော့ မိုက်တယ် နောက်အဆက်တွေစောင့်နေမယ်နော်
ကပေက အရပ် ၆ပေရှိတဲ့ လူ့ဘီလူးကြီး
ဟိုလေ..ဟိုမင်းသား ဗေကြီးကို ဇွန်းဆွဲကြည့် ဟိဟိ
တစ်နေ့ ၁၀ခေါက်လောက် ဝင်ဝင်ကြည့်နေပီး
တော်ဘီ ၊ ကျုပ် ဓါတ်ပုံတွေကို ပရိုက်ဗေဆီ လုပ်ပစ်လိုက်ပြီ
အထုကျတော့ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ မျှော်လိုက်ရတာအေ
ကိုယ့်စော်ကိုယ်တောင် အဲ့လောက် မမျှော်ဖူးဘူး
ဟဲ့ .. ဘဲဥမ
နင်ဂ ဆော်ရှိဂျောင်း ကြွားလိုက်ဒါပေါ့လေ ..
ဟွင်း .. ဟွင်း .. နာမသိ ခက်မယ် ..
၂၅ ကို အပီဆော်လိုက်မယ်
pooch နဲ့ snow white ရယ်
ကိုယ်တိုင်တောင် ဇရပ်မှာနေပြီးဈေးရောင်းနေရတာကို ကိုပေရယ်
ဒါတွေကြောင့်လည်း မိန်းမက အိမ်ပေါ်ကနှင်ချထားတာ
ဟုတ်ပါ့ မိုးဇက် ရယ် ပြောလိုက်စမ်းပါ
၄၅ နှစ်လို့ ဒဲ့ပြောလိုက်ရင် ရရဲ့ သားနဲ့ ဟာကို
အခုတော့ ၂၅ဆိုလို့ ၂၅ ကို ထုလိုက်တာ ပလုံသွားပေါ့
နိုရာလေး နဲ့ မိုးဇက်လေးတို့ ရေ
အဲ့ဒီမှာ တွေ့တာပဲ …
ဘယ်အရွယ်မှန်း မလိုဘူးလေဗျာ …
ဇာတ်ကောင်ကို အလန်းတွေ ဖြစ်စေချင်လို့ ..
၂၅ လို့ တီးထည့်လိုက်တာကို …
ဒါပေမယ့် စိတ်ဓါတ် မကျပါနဲ့ဦး …
နောက်တစ်ပတ် ဆက်ကစ်ကြည့်လိုက်ဦးပေါ့ .. ဟီဟိ ..
ရတနာစောင့် နတ်သမီးလေး နိုဗွီ ဆီကတော့ လာမလုနဲ့နော်
ဆွဲထားတဲ့ ကြိုးလေ့း မြန်မြန်သိမ်းမှ
ဟီး ခုထိတော့ မပါသေးဘူးဗျ ။
ဆက်ပါဦးရှင့် ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ကိုယ်တော်က ဘယ်သူများဖြစ်လေမလဲမသိ။
ထင်တာတော့ ဖားသက်ပြင်း လေ
နောက်အပိုင်းမျှော်နေပါတယ်…………မြန်မြန်လေးတင်ပေးပါဗျို့။ စိတ်ဝင်စားစရာမို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်
ဒါပေမဲ့ မဟုတ်မဟတ် အမှု့နဲ့တော့
ထောင်ထွက် မလုပ်နဲ့နော် ကောင်လေး..
စိတ်ဝင်စားလာပြီ … ။
ဒါနဲ့ … ဟိုလူရည်မွန်လေးက .. ခြောက်မျက်နှာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ …. ။
ကိုရင်မောင်ရဲ့ ….. ယင်နားစာတွေ မစားပါနဲ့.. အပြင်စာတွေ မစားပါနဲ့လို့ မမယ်မက မှာခဲ့တာ … တော်က နားမထောင်ဘူးကိုး ……. ။ အခုတော့ ထောင်ကျခံခဲ့ရပြီမို့လား … ခွိခွိ
အမယ် အီတုန်ရဲ့ သူများဇာတ်လမ်းထဲစောစောပါလာတာ
မနာလိုဖစ်နေပြီ ထောင်ကျတာက ဟိုချည်ဖတ် ဖားမင်းဆွေကို
ချောင်းရိုက်လိုက်လို့ထောင်ကျသွားတာ အီတုန်ရဲ့ ဟုတ်တယ်နော်
ကိုရင်မောင်ရေ .. ဖားမင်းဆွေ ထက် ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေ့လိုက်မယ် ။ http://www.facebook.com/ElevenMediaGroup မှာလမ်းတစ်ခြမ်းကြီး ပြောထားတာလေး သွား ဖတ်ကြည့် ။ ရိုက်ရုံတင်မက အသေသတ်ချင်လိမ့်မယ် ။ …
ဆောဒီး ကိုသန်းထွဋ်ဦးလည်း တင်ထားပါသည် .
လူကောင် ကြီးကြီးနဲ့ တောက် အကျယ်ကြီး ခေါက်သွားတယ် ဆိုတာ…..
သိမ်ဖြူတကျော ဟုန်းဟုန်းတောက် ကျော်ကြားတဲ့ တောင်ညွန့်လူမိုက် ကိုအာဂကြီးများလား မသိ
ဒီလူကြီးက ဂမ္ဘီရတွေ ရတနာသိုက်တွေ လွှတ်စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုဘဲ ……………………………….
ဟိုတလောကလဲ သူယောင်သီးရတယ် ဆိုပီး နာမည်ကြီးသွားသေးတယ်။ ဒါပေသိ တကယ့်တကယ်
ကျတော့်မှ သူယောင်သီး မဟုတ်ဘဲ နွယ်သီးကြီး ဖြစ်နေတယ် ဆိုဘဲ ကြားတာပြောတာ။
အောက်က ပန်ပန် ပြောထားလို့
သိတွားပီ မဟုတ်လားဟင်င် …
၂၅ ကို အပီဆော်လိုက်ဒါ
ဘီလို ဖစ်သွားဒုံးဟင်င်င် ..
ဖိုးထောင်တော့ ဆွဲထားလို့ ပါသွားပီဗျို့ …
ကိုနာဂ ကလည်းဗျာ ..
ခုမှ အစပဲ ရှိသေးတာလေဗျာ …
နောက်တော့ ပါလာမှာပေါ့လို့ ……
သူဂလည်း ဇွတ် ..
ကားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ ကိုယ်တော်ကို
မရွှေကြည် ခိုက်သွားပီလားဗျ .. ဟီးဟိ
မြန်မြန်လေး တင်ပါ့မယ် ..
စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုလို့လည်း ကျေးဇူးပါနော့ ..
အဲ့အခန်းကို စရေးမယ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ
ကိုရင်မောင် ဆိုတာကြီးကလည်း ပေါ်လာသဗျို့ ..
ဒါနဲ့ ထူးပါဘူးလေဆိုပြီး ကစ်ထည့်လိုက်တာ ..
ကိုရင်မောင်က စိတ်မဆိုးလို့ .. အဟီးးးး
ဟိုလူရည်မွန်လေး ချိုဒါ ….
ခုလို လာရောက် အားပေးသွားတာ
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း ………
ဦးခိုင် နဲ့ မောင်အောင်ပု က အဓိက ဇာတ်လိုက် တွေ ထင်ပါရဲ့။
မောင်ပေ့ မှာ နားရွက် ၂ခု မက ရှိမှန်း အခု မှ သိတော့ တယ်။
ခုမှ ဇာတ်က ပျိုးတုန်းဆိုတော့
အရင် လိုက်ပြနေရတယ်ဗျို့ …
လာရောက် ဖတ်ရှုအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ ..
သူကြီးကို နာနာနှိပ်ဗျ။ဒီလူကြီးက လစ်ဘရယ် ဆိုတော့ လူဆိုးလုပ်ရင်သူချည်းခံရမှာ။ဟိဟိ
ကျုပ်ကတော့ လစ်ဘရယ် မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ လစ်ဘရယ် မဟုတ်တော့ လူဆိုးတော့လုပ်ချင်သား။
ပြီးရင် ကိုယ်ကချည်းပဲ ဗျင်းချင်တယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးမှာ လူဆိုးကသေရမယ်ဆိုရင်တောင် သေနတ်မှန်ပြီး
P.S ရှည်ရှည်ရေးမရတာနားလည်ပါတယ်။ခံစားချက်ပေါ်မှ ချက်ချင်းကောက်ရေးလို့ရတာကိုး။
ဒီတော့ အတင်းအကြပ်မတောင်းဆိုလိုပါ။ကိုအံစာတုံးကြီး အားမှရေးပါ စောင့်ဖတ်ဖို့က အနော့တာဝန်ကိုးဗျ။
ကြိုက်တော့လဲတတ်နှိုင်ပါဘူးလေ။ကိုအံစာတုံးကြီး အမြဲ ၁ ပေါက်ကျပါစေဗျားးးးးးးးး
အမြဲ ၁ ပေါက်ကျပါစေ ဆိုတာ ….
ခံစားချက်ပေါ်တာနဲ့ ကောက်ရေးတဲ့အခါလည်း ရေးလိုက်တယ်ဗျ ..
ကောက်ရိုးမီး လက်သွားနဲ့ ရေးတတ်တာကတော့ အများဆုံးပါဗျာ ..
အရေးကြီးတာက စ,ဖြစ်ဖို့ပဲဗျ …
ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် နည်းနည်းလောက် စလိုက်တာနဲ့
နောက်ပိုင်းဟာတွေက အော်တိုထွက်လာတော့တာပဲ …
ခုဆို ကိုမိုးတိမ် အပါအဝင် ရွာထဲက ရွာသူားတွေက အားပေးဖတ်ရှုကြတော့ ကျနော်မှာ ရေးဖို့ မပျင်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာ …
နို့မို့ဆို အကျင့်က တန်းလန်းကြီး ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တာရယ် ..
ဒီအတွက်လည်း ရွာသူားတွေကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဗျို့ ….
စာရေးတဲ့အခါ ညဘက် လူခြေတိတ်ချိန် တစ်ယောက်တည်းဆို
ခုလို ဖတ်ရှုအားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ …
ရုပ်သေးစကားနဲ့ ပြောရရင် ခုမှ ကမ္ဘာတည်တုန်းဆိုတော့…..
မဟာရာဇာရေ- ရွာသူားတွေ နာမည်မို့လို့ပဲ တော်တော့တယ်။
နို့မို့ဆို သိုင်းဝတ္ထုတွေလို ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာ ဇာတ်လိုက်တွေရဲ့ နာမည်နဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းလေးတွေပါ ရေးပေးထားမှရမယ်။ [:))]
ရွာသူားတွေ များများပါနိုင်အောင်လို့ …
ဇာတ်ကို ဆွဲဆန့်ထားရတာဗျို့ (ဝန်ခံတာ) …
ခုထိ တည်နေတာတောင် “မမ” “အရီးလတ်” ဆိုတဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ အမျိုးသမီး ဇာတ်ကောင်တွေတောင် ပါသေးဘူးရယ် ….
အန်တီဆူး တစ်ယောက် ပျောက်နေသလားလို့ ..
ဆူး ဆီမှာ အင်တာနက် မကောင်းလို့ ရွာထဲ သိပ်မ၀င်ဖြစ်နေတာပါ။
၀င်တဲ့ အခါ နှေးလွန်းလို့ အသံမထွက်တာပါ။ ကိုယ်ပြောတာ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ မဖြေရှင်းနိုင်မှာ စိုးလို့.. တိတ်တိတ်လေး နေနေတာပါ။ အလုပ်မအားတာလည်း ပါတယ်။
ဂျီတော့လည်း သုံးမရဘူး ဖေ့ဘွတ်လေး လှုပ်စိ လှုပ်စိ နဲ့တော့ တက်သလိုတော့ ရှိတယ်။ တခြား ဟာတော့ မနက်ကနေ ညနေအထိ ဖွင့်မှ စာမျက်နှာ တခုပွင့်တယ်။
နောက်ပိုင်း အလုပ်တွေ အားမှ ပြန်လာခဲ့မယ်။
ရတနာ သိုက်ရှာပုံတော် ဇတ်ကောင်ထဲမှာ နာမည် မပါချင်သေးဘူးနော်..
အန်တီဆူး မအားလို့ ရွာထဲ သိပ်မ၀င်ဖြစ်ဘူး။
ရတနာသိုက် ရှာပုံတော်မှာ မပါလိုက်ရင် ဝေစုမရလိုက်မှာစိုးလို့။
ဦးခိုင်နဲ့ မောင်အောင်ပုဇာတ်ရုပ်က အပြင်သဘာဝနဲ့ နီးစပ်တယ်နော်။
သိပ်ပြီး ပြန်ပြောမနေနဲ့ဗျာ…. ရှေ့ဆက်ပြီး မြန်မြန်လုပ်…..
ဒုက္ခဆိုတာထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာကို စောင့်ရတာလဲ ဒုက္ခဆင်းရဲပဲ….
ကိုးရီးယားကားတောင် စောင့်ရမှာကြောင့် မကြည့်ခဲ့ဘူး…..
ဟုတ်တယ်ဗျ … ကိုရီးယားကိုစိတ်မရှည်လို့ နေပါတယ်ဆိုပါမှ …
ရတနာသိုက် မှာ အငိုက်မိရပလေတယ် …
ကို ၆ မျက်နှာရေ ဆန့်တငံ့ဖြစ်အောင် တမင်လုပ်ရေလျော့သလား…
ရွာသူားတွေ တဝကြီးဖတ်ရအောင် ရှည်ရှည်လေး လုပ်ပေးဇမ်းဘာ…..။
ငလုလို့ရမလားကွ၊ တမင်ဂလာ အလုခံလိုက်တာပဲရှိမယ်..သမီးဒေါ်ဂလေးမျက်နှာနဲ့..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ဟုတ်လှပီမထင်နဲ့ သဂျီးရေ… ယောက္ခမလောင်းဂျီးနဲ့ စောစောစီးစီး ရန်မဖြစ်ချင်လို့ အလျှော့ပေးလိုက်တာ၊ နောက်ဆုံးတော့ သဂျီးဘယ်လောက်ရှာရှာ စည်းစိမ်အကုန်လုံး သမီးဒေါ်ဂလေးဆီ ရောက်မှာပဲ မဟုတ်လား။ ကြောင်သားမက်လေးဆီက ဟောဒီဆောင်ပုဒ် မှတ်ထားလိုက် ယောက္ခမဂျီးရေ…”Work smarter, not harder.” :cool:
တစ်ခွန်းဆို တစ်ခွန်း မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်
မင်းသိက္ခာ တပည့်ရင်းလားမှတ်ရအောင် ရေးတတ်တယ် ။
နောက်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်အားပေးဖို့ စောင့်နေပါတယ်နော် ။
ကိုရင်မောင်..က ထောင်ထဲက ထွက်လာတယ်.. ။ အဟိ ။
တော်သေးတယ်…သား… ထောင်ထဲ မေ၇ာက်လိုက်လို့။
ဘုရား.သိကြားမ..လို့ …. ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်..လ.ို နေ၇ာမျိုးပဲ…ပါ ပါရစေ..။
ကိုရင်မောင်က ပြန်လာပြီး ထောင်ထဲအလည်သွားနေတာလား… ပြန်လာတာတောင်မသိလိုက်ဘူး။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စိတ်ဝင်စားပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာလေးပဲ။ ရတနာမြေပုံကို ကြောင်ကြီးဆီကလုချင်ရင် ငါးကြောင်တကောင်ယူသွား။ ကြောင်ကြီးကိုလွယ်လွယ်တော့လျှော့တော့မတွက်နဲ့ တော်ကြာသူကပြန်လုထားမှ ဟုတ်ပေးဖြစ်နေဦးမယ်။
မောင်ဂီဆီကလုချင်ရင်တော့ စိုင်ကလေးတွေခေါ်သွား။စိုင်ပစ်နေတုန်းဈာန်ဝင်နေတုန်းလုပြေး ။
ပြီးရင်အခုတည်းကဝေစုခွဲဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ထား။ကျပ်ငွေနဲ့ဝေစုခွဲမှာလား။ ဒေါ်လာနဲ့ဝေစုခွဲမှာလား ။ ပွိုင့်နဲ့ဝေစုခွဲမှာလားဆိုတာ ။
ဒုတိယပို့စ်ကို ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီ 50တွင်ဖတ်ရူပြီးစီးပါကြောင်း ………